Astaanta ugu fiican: tan ugu caansan taariikhda | Hal-abuurka Online
ka calaamaduhu waxay jireen muddo dheer. Waxay yihiin muuqaal muuqaal ah oo ka mid ah astaanta ay ka tirsan yihiin waxayna leeyihiin ujeedo ah in lagu dhejiyo maskaxda kuwa u arka in la xasuusto oo la aqoonsado. Laakiin, ma jirto calaamad keliya oo ugu fiican, laakiin qaar badan oo iyaga ka mid ah.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa jiray calaamado abuuray dareen leh oo ilaa maanta firfircoon oo la aqoonsan yahay xitaa marka aysan sidan magaca astaanta. Yaxaaska Lacoste, caruusada ka samaysan taayirada Michelin, ama tufaax qaniinay oo Apple ah ayaa ah tusaalooyin uun. Laakiin ma jeclaan lahayd inaad ogaato waa maxay calaamadaha ugu fiican taariikhda? Dib u eegis ayaan u samaynaa iyaga.
1 Nike, miyay noqon doontaa astaanta ugu fiican abid?
3 Dhulka hoostiisa ee London
7 Dibigii Osborne
Nike, miyay noqon doontaa astaanta ugu fiican abid?
Shaki kuma jiro in, inta lagu jiro sahannada badan ee la sameeyay (gaar ahaan Boqortooyada Ingiriiska iyo Ameerika), ay kor u kaceen Nike marar badan oo leh abaalmarinta koowaad ee calaamadaha ugu fiican taariikhda.
Shaki kuma jiro in Nike 'swoosh' uu yahay astaanta ugu fiican ee aqoonsiga. Qof kastaa wuxuu ku gartaa astaanta xitaa marka uusan magac ku jirin.
Oo hadda markaan ka hadalno, ma ogtahay inay la xiriirto garabka ilaahadda Nike? Tani waxay ahayd ilaah Giriig ah waxaana dhiirigeliyay Carolyn Davidson markii ay horumarinaysay astaanta.
Waxay noqon doontaa sababtoo ah aqoonsigan, inkasta oo isbeddellada ugu yar ee la sameeyay, ay weli tahay calaamadda ugu caansan ee kuwa badan oo jira.
Magacaabidda Apple waa in maskaxdaadu ay dhaliso sawirka caadiga ah ee tufaaxa (sida caadiga ah qalinka) oo qaniinyo ku leh dhinaca midig. Laakiin tufaaxaasi ma leeyahay dabo? Iyo caleen? Hadda waanu ku xidhnay?
Markii hore, calaamaddu wax shaqo ah kuma lahayn tan aan hadda naqaanno. Xaqiiqaduna waxay tahay in astaantaas ugu horreysay ee ay lahaayeen ay dhab ahaantii ahayd sawir Isaxaaq Newton oo geed tufaax ah hoostiisa ah, oo tufaax madaxiisa ku dul saaran yahay (iyo tilmaanta caadiga ah ee halyeyga ah in mid ka mid ah madaxiisa ku dhacay iyo fikrad 'weyn' u timid. isaga). Si kastaba ha ahaatee, Steve Jobs qudhiisu wuu ogaa in tani aanay shaqaynayn, sanadka soo socda, calaamaddu waxay u beddeshay midda hadda jirta, oo kaliya in la sameeyay, sida caadiga ah dib u habeynta joomatari iyo midabyo, ilaa kan hadda jira.
Iyo heerka haddii ay tahay astaanta ugu fiican taariikhda, waa in aan ku darnaa liiska tan iyo maanta astaantaas, Kaliya marka la eego, waxay naga dhigaysaa inaan aqoonsanno astaanta (iyo sidoo kale raaxada, waa in la yiraahdaa).
Dhulka hoostiisa ee London
Aynu raacno mid kale oo ka mid ah calaamadaha ugu wanaagsan taariikhda. Oo annagu ma samayno, maahan calaamad loogu talagalay in lagu iibiyo (si sax ah), laakiin si loo bixiyo adeegyada gaadiidka. Maxaan ka hadlaynaa? Hagaag, dhulka hoostiisa ee London.
Haddii aadan waligaa hore u arag summada, tani waa a goobaab leh xariiqyo ballaadhan oo casaan iyo buluug ah, in yar ka ballaadhan goobada, dhexdana ku leh magaca " Dhulka hoostiisa."
Naqshadan oo laga yaabo inay u ekaato calaamad joogsi, waa mid ka mid ah calaamadaha ugu dheer ee London, gaar ahaan maadaama ay si toos ah ugu saleysan tahay tii ugu horreysay ee ay lahayd, oo sidoo kale ahayd goobada leh bar (iyo faahfaahin dheeraad ah) .
Shaki la'aan, tani waa mid ka mid ah kuwa badan oo u qalma calaamadda ugu fiican. Mana aha wax ka yar, sababtoo ah Qof kastaa wuu garanayaa waxa ay ka dhigan tahay, xitaa haddii aysan haysan dhammaan ereyada. Tusaale ahaan, 'jacaylka' waxaa beddelaya wadnaha iyo 'New York', ama 'New York' dhab ahaantii waxay leedahay soo gaabinta NY.
Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii la abuuray 1977 by Milton Glaser ee Waaxda Ganacsiga ee Gobolka New YorkWaxay ku guulaysatay inay sii socoto muddo dheer, gaar ahaan sababtoo ah waxay muujinaysaa jacaylka magaalada.
Intaa waxaa dheer, mahadda astaantan oo kale oo badan oo la mid ah ayaa loo sameeyay magaalooyinka kale.
Sida aad la socotaan, markii ugu horreysay ee Coca-cola la suuq geeyo, waxay ku jirtay farmasiyada, maadaama ay dawo ahaan u timid. Si kastaba ha ahaatee, wakhtigu wuxuu ka dhigay cabitaanka fudud ee loogu iibsiga badan yahay adduunka.
La astaanta ayaa markii ugu horreysay la sameeyay 1887-kii Runtuna waxay tahay, marka laga reebo wax-ka-beddelka qoraalka iyo midabbada, runtu waxay tahay in salkeeda la ilaaliyo. Waxa laga yaabo inaadan ogeyn ayaa ah in xitaa sumaddani ay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lagu qariyo fariimaha hoose. Qaar baa waxay yidhaahdaan maroodi baa ka soo baxa ereyga "Dabo"; Kuwo kale waxay yiraahdeen haddii si toosan loo rogo, waxaa laga turjumi karaa Carabi (turjumadeedu waxay noqonaysaa "Maxamed iyo Maka midna"); in haddii aad si toosan u dhigto aad arki doonto nin cad oo ku tufay mid madow ... Xaqiiq? Taas oo loo arko mid ka mid ah calaamadaha ugu fiican. Adoo aan la gelin noocyada kale ee doodaha.
Ma ogtahay in dollka Michelin uu magac leeyahay? Hagaag haa, waa la yiraahdaa Bibendum, oo ah caruusad yar oo lagu abuuray taayirro badan oo calaamad ah. Laakiin ka digtoonow, bilowgii, 1894, sidaas may ahayn, laakiin waxay u ekayd nin baraf ah oo xadhko lagu xidhay.
Muddo ka dib waxa uu hagaajiyay "tirada" isaga oo aan lumin dhumucdiisii, inkastoo sannadihii ugu dambeeyay uu lumiyay miisaan badan.
Wargeysyo badan, wakaaladaha xayaysiisyada, iyo xitaa saxafiyiinta ayaa ku qiimeeyay calaamada ugu wanaagsan qarnigii XNUMX-aad. Oo mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay ee soo baxay wuxuu la soo baxay mindi dhiig leh ama sigaar iyo muraayado (oo aan muuqaal wanaagsan lahayn sida hadda).
Haddii aad u safarto Spain, waxaa suurtogal ah, in mararka qaarkood, aad la kulanto boodh ku yaal waddada dibiga. Kaliya silhouette madow. Maya mar dambe.
Hagaag, waa inaad ogaataa in tani ay ahayd Habka kor loogu qaado Brandy de Jerez Veterano, oo ka socda Osborne. Oo maanta waxaa lagu dhawaaqay inay tahay "dhaxalka dhaqanka iyo farshaxanka ee dadyowga Spain." Markaa waxaa la odhan karaa waa astaanta ugu fiican ee astaantaada.
Sida aad ogtahay, Shell waa shirkad tamar iyo kiimiko ah laakiin, Ma ogtahay in ka hor ay ahayd shirkad qadiimiga ah, xiisaha iyo xeebaha bari? Waad saxantahay.
Iyaga ayaa faa'iido badan u ahayd beddelka kerosene ee qolofka bari. Laakin in yar oo yar waxay u baddalayeen meheradda midda hadda jirta. Waxa ay xajiyeen waa calaamadii ay lahaayeen, inkastoo uu jiro isbedel yar. Oo waa kaas Haddii ka hor intaanay isticmaalin qolof mussel ah, 1904 waxay bilaabeen isticmaalka qolofka qolof ah.
Tan iyo 1971-kii astaanteedu isma beddelin, markii uu sameeyay Raymond Loewy.
Sida aad arki karto, waxaa jira calaamado badan, iyo qaar kale oo badan oo aan ka tagnay oo aan xusin si aan loo daalin, kuwaas oo si fiican u noqon kara calaamadda ugu fiican, laakiin runtu waxay tahay in ay taasi keeni karto in aan iska indho-tiro kuwa kale oo badan. Intaa waxaa dheer, mawduuca ayaa halkan ku soo galaya tan iyo, xitaa marka sahaminta la sameeyo si loo doorto midka ugu fiican, waa ra'yiga mid kasta oo iyaga ka mid ah. Haddaba, maxay noqon lahayd summada kuugu fiican abid? Aan ogaano!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Astaanta ugu fiican: tan ugu caansan taariikhda
Beddelka bilaashka ah ee Photoshop